21 / 05 / 2021 24 / 05 / 2021 Jack Yates 628 Views စာ0မှတ်ချက် 76186 အနက်ရောင် Panther နဂါး Flyer, ၇၆၁၉၁ Infinity Gauntlet, Avengers: နောက်ဆုံးအခြေအနေဟာ, Avengers: The Infinity Saga, Black က Panther, အုတ်ဖို, ပထမဦးစွာမျှော်, Lego, Lego Avengers Endgame, Lego Marvel, Marvel, Shuri, အဆိုပါ Infinity Saga
၏ပထမ ဦး ဆုံးပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း Lego Marvel အဆိုပါ Infinity Saga အစုံ st ဖြစ်ကြသည်artကျွန်တော်တို့ကိုအတွက်သစ်ကို minifigures နှင့်မော်ဒယ်များမှာကန ဦး ကြည့်ပေးခြင်း, ပေါ်လာဖို့ ing 76186 အနက်ရောင် Panther နဂါး Flyer.
တရား ၀ င်အွန်လိုင်းစတိုးသို့တရားဝင်ဖြည့်စွက်ပြီးသည့်နောက်တွင်ကံကောင်းသူအချို့သည်လမ်းပေါ်တွင်ရှိသည်art၏အသစ်သောအကွာအဝေးအပေါ်မိမိတို့လက်ကိုရဖို့ ed Lego Marvel အစုံ။ ဤလှိုင်းသည်လာမည့်ထုတ်လွှတ်မှုများနှင့်အဓိကပြblockနာများဖြစ်လိမ့်မည်ဟုအတိတ်အခန်းကြီးများကဲ့သို့ပင် Marvel ရုပ်ရှင်ရုံiverseာအာရုံစိုက်ဖြစ်ကြသည်။ Avengers: Endgame ယဉ်ကျေးမှုအပေါ်အခြေခံပြီးတည်ဆောက်ထားတဲ့အဆောက်အအုံသစ်နှစ်ခုထဲကတစ်ခုကိုသင်ကြည့်နိုင်ပါတယ် အုတ်၏အစောပိုင်းပြန်လည်သုံးသပ်.
တစ်ခုမှာမီးမောင်းထိုးပြ 76186 အနက်ရောင် Panther နဂါး Flyer ယင်း၏အသေးစားဓာတ်ပုံများသည် ၀ ီကာနန်စူပါဟီးရိုးပုံစံသစ်အပြင်သူမ၏စစ်တိုက်ရာတွင် Shuri အတွက်ပုံစံတစ်မျိုးနှင့် Thanos ၏စစ်တပ်အဖွဲ့ဝင်တစ် ဦး ဖြစ်သော Chitauri တို့ပါ ၀ င်သည်။ ဓာတ်ပုံတွေကဇာတ်ကောင်သုံးယောက်လုံးကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြည့်ပြီး ဦး ခေါင်း၏နောက်ကျောကိုသယ်ဆောင်သွားခြင်းအကြောင်းကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်။
မော်တော်ယာဉ်၏ poseability ကိုလည်းအထင်ကြီးငွေပမာဏရွေ့လျားမှုနှင့်အတူပြန်လည်သုံးသပ်အတွက်သရုပ်ပြသည်arts ကိုတည်ဆောက်သို့ပေါင်းစည်း။
Lego 76186 အနက်ရောင် Panther နဂါး Flyer ၏ကျန်အတူဖွင့်ပါလိမ့်မယ် Marvel အဆိုပါ Infinity Saga အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ဇွန်လ 1 သို့မဟုတ်သြဂုတ်လ 1 ရက်နေ့တွင်သတ်မှတ်။ တစ်နည်းအားဖြင့်, သင်ကြိုတင်မှာယူနိုင်ပါတယ် ၁၈ နှစ် ၇၆၁၉၁ Infinity Gauntlet ယခုပင်ထိုနေ့တွင်၎င်း၏လွှတ်ပေးရန်၏။
← LEGO World Builder ၏ NINJAGO တိုတောင်းသောနောက်ကွယ်မှ
ထိုနေ့၏အုတ်ပုံ: D.Va →